गफ ! .....: June 2008
यो भन्दा अघिल्लो पोष्टमा राखेको कविता ' बाग्मतीको नियति ; गति नेपालको ' मा कमेण्ट गर्दा मैले ब्लगमा राखेको फोटोमाथी पनि जोडदार कमेण्ट ठोकिदिनुभएको थियो कसैले Anonymous भएर । मलाई फोटोले साँच्चै सोचमा डुबायो र फोटो फेर्न नै बाध्य तुल्यायो । फेरेर अर्को राम्रो फोटो राख्ने ईच्छा भयो तर राम्रो फोटो पाईनं । फोटो राखेजति सबै फाईलहरु खोजें र बल्ल यौटामा चित्त बुझाएर ब्लगमा राखें । त्यसबेलासम्म मलाई फोटो शब्दले झोंक चलाईसकेको थियो । के को राम्रो चाहियो नि फोटो सोटो भन्दैथें फोटो शब्दमै यौटा गजलको काफिया बन्ने सम्भावना देखें तब त के चाहियो लागें कस्सिएर फोटोलाई काफिया बनाएर यौटा गजल लेख्न । र लेखें यस्तो -
रुप यो कुरुप संधैको छ सुन्दर यौटा फोटो होस् ।
गाँसोस् साईनो त्यै फोटोले त्यो लामोहोस् न कि छोटो होस् ।
शुशिल हुन उनि अझ सुन्दर हुन विचारमा ,
के नै नाप्छ र रुपले भलै शरिर थोरै मोटो होस् ।
सिंगारिनु किन ? मेरो ज्यान सधैं धुलोमाटो मै छ ,
उनको मुखेञ्जी पर्दा तर सुकिलो यौटा भोटो होस् ।
ईज्जत र प्रेम दिई उनलाई सुखी राख्न सकुँ ,
बस्ने कुटी , लाउने सुती अनि खाने आटोरोटो होस् ।
जुनै किन छुनुपर्यो र हाँस्न सकुँ भुईँमै तर ,
चाहंदैन 'दीपक' फेरी नि भाग्य उसकै खोटो होस् ।
धन्यवाद अज्ञातजीलाई , यो गजल भेंट तपाईंलाई । फेरी आउनुभयो भने तपाईंले पनि भनिदिनुहोला है त कस्तो भयो ?
Posted by दीपक जडित at 3:56 AM7comments: Links to this post
कठैबरा ! वाग्मती
कहिल्यै बग्न सकिनन्
स्वतन्त्र भएर सलल
खुल्न नसकेर कहिल्यै
मात्रै सडकहरु बगिरहे
जुलुश भएर सलल
न रोक्यो कहिल्यै
पेटीमा थुपारिएको डंगुर फोहोरले
डण्डीफोर निचोरेको अनुहार जस्तो
काठ्माण्डौ खित्का छाड्छ
खुट्टा उचालेर अधुरो खुशीमा
यौटा विचार भड्काउंछ
यौटा विचार अड्काउंछ
बल्खु ट्वाल्ल परिरहँदा
लाजले टाउको झुकाउंछ
खै नेपाल कहाँ छ ?
आवाजहरुकै भिडमा बिलायो
अब त रोल्पापनि
काठ्माण्डौ मै हरायो
निमुखो रत्नपार्क बरा !
अझै विचार बगाउंछ
उरालेर मान्छेहरु सडकमा
तरंग - तरंग
पुलुक्क हेर्छिन काठ्माण्डौलाई
कठैबरा ! गति नेपालको
उन्को र मेरो नियति उस्तै
संधै रोकिनुपर्ने आफ्नो गति
अरुअरुले नै बनाएको फोहोरमा ।
Posted by दीपक जडित at 1:31 AM3comments: Links to this post
गफ एक -
केहिदिन अगाडी मैले ब्लगर साथी आकारको ब्लग http://aakarpost.blogspot.com/ मा डा . कृष्णहरी बराल सरको गीतहरु सुनेको थिएं त्यसबेला मलाई आफ्नो ब्लगमा पनि किन आफ्नो गीत नबजाउने भन्ने लाग्यो । आकारजीसंग ईमेलमा सम्पर्क गरेर कसरी गर्ने भन्ने सोधिखोजी गरेर आज आफ्नो गीतहरु आफ्नै ब्लगमा सुन्नलाई उपलब्ध गराउन सकेको छु र यसमा मलाई खुशी लागेको छ । आकारजीलाई सहस्र धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको निंती ।
मैले एक अञ्जुली माया नामको गिती एल्बम गतवर्ष नै तयार पारेको हुँ । आफैंले सबै खर्च बेहोरेर तयार पारेको यस एल्बमलाई बजारमा निकाल्ने जिम्मा लिएको धौलागिरी क्यासेट सेण्टरलाई मैले विज्ञापनको जिम्मा समेत दिएको भएपनि न आवश्यक विज्ञापन गर्यो न बजारमा नै कसैले देख्यो मेरो एल्बम । एक त आधुनिक गीतहरुको बजार कम भैरहेको अवस्था त्यसमाथी मलाई यसबारेमा धेरै थाहा नभएको र म यता अमेरिकामा भएको ; के चाहियो र धौलागिरीलाई झण्डै ३०० सिडीहरु र १०० / २०० क्यासेटहरु मलाई नै बेचेपछि धौलागिरीले मेरो एल्बम बजारमा पनि किन लानुपर्थ्यो र ? मसंग धौलागिरी प्रति असंतुष्टी भएपनि उसलाई केहि गर्न सक्ने अवस्थानै थिएन । यस्ता कुराहरुमा नियत नै ठग्ने भएपछि कस्को के लाग्छ ? न गीत संगितको क्षेत्रमै गतिलो कानुन छ (कुनै क्षेत्रमा नभएको) । खै बजारमा मेरो एल्बम किन देखिंदैन भन्दा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्यो नि भन्ने जवाफ पाईने । आफ्नो तर्फबाट पनि विज्ञापनको निंती केहि नै नगरेको हैन तर स्थिती यस्तरी देखापर्दै आयो की विज्ञापनको लागी जतिनै गरेपनि हातलागी शुन्यको शुन्यनै हुने तसर्थ मैले बरु चुपचाप बस्नु नै निको ठानें । बरु मलाई अहिले खुशी लागेको छ ब्लगमा आफ्नो गीत सुनाउने उपाय फेला पारेर । मैले एक अञ्जुली माया नाम दिएर बनाएको अनलाईन गिती संग्रह ( http://ekanjulimaya.blogspot.com/ ) मा पनि मेरा गीतहरु सुन्ने ब्यावस्था गरेको छु ।
गफ दुई -
अहिले ईन्टरनेटको माध्ययमले हामी आफुले लेखेको गीत , कथा , कविता , गजल जेसुकै पनि तुरुन्तै सबैलाई बांड्न सक्छौं । ब्लग चलाउनेहरुले आफ्नो ब्लगमार्फत , ब्लग नचलाउनेहरुले पनि ईमेल मार्फत कुनै अन्तरजाल पत्रिकाका पठाएर आफ्ना रचनाहरु सबैलाई पुर्याउन सहज भएको छ । मेहनत गरेर कागजको पन्नामा सफासंग लेखि त्यसलाई खामबन्दी गरि हुलाक घर पुगेर पैसा खर्च गरिगरि रजिस्ट्री गरेर कुनै पत्रिकाको ठेगानामा पठायो र आफ्नो रचनाले स्थान पाउंछ कि भनि हरेक अंक किन्यो तर कहिल्यै स्थान नपाउंदा म लेख्न जान्दिनं कि के हो भन्ने भ्रम पाल्यो अनि अरुको रचनाहरु हेरेर हैन यो भन्दा त मेरो राम्रो थियो भन्दै भित्रभित्रै कुंढियो गर्नुपर्ने स्थिती अहिले रहेन ।
साहित्यकै कुरा गर्दा कसैकसैले अहिलेको समयलाई साईबर साहित्यको समय भनेर लेखेको पनि देखेको छु । वास्तवमै म पनि मान्छु यो साईबर साहित्यकै युग हो । आफ्नै कोठाभित्र बसेर हामी आफ्ना रचनाहरु अरुलाई विश्वको हरेक कुनामा सुनाउन सक्छौं । त्यसमाथी क्रिया प्रतिक्रिया गर्न सक्छौं । ईन्टरनेटमा देखापरेका भिभिन्न पत्रिकामा निकाल्न सक्छौं । यहाँ सम्म कि यौटै रचना २/३ वटा ईन्टरनेट पत्रिकामा छपाउन सक्छौं । म आफैंले पनि त्यसो गर्ने गरेको छु । कसैले कतै हेर्लान कसैले कतै , त्यसैले उपलब्ध सञ्जालमा सबैतिर छर्नसके धेरैले हेर्न पाउंथे भन्ने लाग्छ मलाई पनि । तर यो ठिक हो वा हैन भन्ने कुरामा चैं म अन्जान छु । मैले पठाउने गरेको धेरैजसो ईन्टरनेट पत्रिकामा यहाँ प्रकाशित रचनाहरु अन्यत्र प्रकाशित गर्दा स्रोत खुलाउन पर्ने वा मनाहि नै छ भनेर लेखेको देखेको छैन ; बरु कहिँ यहाँ प्रकाशित रचनालाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउंन असमर्थ छौं भन्ने लेखेको देखेको छु तर केहि हिंदी साहित्यिक पत्रिकाहरुले भने त्यस्तो प्रावधान राखेको देखें । जस्तै - http://srijangatha.com/ तव मनमा जिज्ञासा उठ्यो के उनिहरुले रचना संप्रेषण गरेबापत पारिश्रमिक दिने गर्छन र त्यसो गरेका हुन ? के नेपाली भाषाका ईन्टरनेट पत्रिकाले पारिश्रमिक नदिने भएर नगरेका हुन ? पारिश्रमिक दिईने रचनालाई अन्यत्र प्रकाशन गर्दा कि त स्रोत खुलाउनु पर्ने कि त निश्चित अवधीभर अन्यत्र प्रकाशन गर्न नपाउने भन्ने कुरासम्म ठिकै होला तर सित्तैमा रचना लिएर यो रचना अन्यत्र प्रकाशित गर्नुपर्दा स्रोत खुलाईदिनु या अन्यत्र नपठाउनु भन्नु कतिको उचित होला ? के रचनाकारले आफ्नो रचना कतै राख्दा या पठाउंदा जबर्जस्ती कसैको पत्रिकाको स्रोत खुलाएर विज्ञापन गरिदिनुपर्छ र ? अनि आफ्नो रचना प्रकाशनार्थ कुनै पत्रिकालाई दिएको अवस्थामा उक्त पत्रिकाले सित्तैमा रचना लिएर यो रचना अन्यत्र प्रकाशन नगर्नुहोला भन्न उचित हुन्छ ? मैले झैं सानोतिनो रचना लेख्ने कसैले पनि आफ्नो रचनाबाट पारिश्रमिक पाउने आशा गर्दैनन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै पत्रिकामा आफ्नो रचना पठाउंदा प्रकाशित हुनुलाई नै पारिश्रमिक सम्झन्छु म त अझ त्यसमा प्रतिक्रिया पाउंदा पुरस्कार पाए जस्तो महसुस हुन्छ त्यसैले होला सित्तैमा रचना उपलब्ध गराउंदा पनि यो रचना अन्यत्र प्रकाशित नगर्नुहोला भन्ने सुन्नुपर्दा कानलाई अप्ठ्यारो हुंदो रहेछ । (यो मेरो विचार है ; यस सम्बन्धमा नियम चैं के छ मलाई थाहा छैन ।)
Posted by दीपक जडित at 5:39 AM3comments: Links to this post
फेरी गजलकै पालो पर्यो । यस्लाई रोक्नै सकिनं । म हाँसेको कुरा लेख्दैछु तर अझै धेरै घटनाहरु सम्झना आईहाल्छ कि भनेर अलि पर्खन मनलाग्यो र गजल नै राख्दैछु फेरी । मैले वसन्तजीको ब्लगमा शिर्षक विहिन कवितामा कमेण्ट लेख्दा आफ्नो तर्फबाट उक्त कवितालाई शिर्षक दिएको थिएं - 'आफ्नै खल्तिभित्र आधा म' भन्ने । त्यसले मलाई छाड्दैछाडेन र यो गजल लेखें ।
आफ्नै खल्तीभित्र म पनि आधा बाँचे ।
आफ्नै खल्तीभित्र पनि म आधा बाँचे ।
भएर आफ्नै नियतीको प्यादा , बाँचें
हर-हिसाब नमिल्दा हुण्डीमुण्डीमा ,
जिन्दगी कैले कम कैले ज्यादा बाँचें ।
वाँसुरी बजाउंदै आफैं कृष्ण बनि ,
नाम आफ्नै जपेर म राधा बाँचें ।
हत्यारा भनौं कि या भनौ अपराधी ,
शिकार गरेर ईच्छाको , ब्याधा बाँचें ।
कैले बाँधें बाचा कसम कैले तोडें ,
पटक् पटक् तर यौटै ईरादा बाँचें ।
विचारमा बाँच्न जीवन नसके नि ,
रुँदा , हाँस्दा र खेल्दा अनि खाँदा बाँचें ।
भन्नलाई ह्रदयमा 'दीपक' बाली ,
माहात्माको जस्तै जीवन सादा बाँचें ।
Posted by दीपक जडित at 5:44 AM2comments: Links to this post
शिर अडाई तिम्रो काखमा
मायाका कुरा गरुँ लाखमा
टल्के बिन्दुली झल्के त्यो फुली
तिम्रो माथमा तिम्रो नाकमा
वृक्षखोपीमा लुकेर चरी
नाचदै हेर शाखशाखमा
गीत गाएर हाम्रो मायाको
संधै सुनाउंछिन चाखमा
झनै देखिने म नै देखिने
हेरीरहुँ झैं तिम्रो आँखमा
हाम्रो मिलन माथी जलन
गर्ने दुनियाँ जलोस् राखमा ।
वसन्त सरलाई धन्यवाद ! मैले केहि फेरबदल गरेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 9:28 PM4comments: Links to this post
म आफैंलाई केलाउंदैथिएं । लाग्यो मैले यो हत्ते गर्नु हुंदैन । यो मरिहत्ते पट्टक्कै गर्नुहुंदैन । त्यसैले लाग्यो अब केहिदिन म सोच्दिनं ( नसोचि बस्न सक्ने कुरै भएन ) । हुनपनि उत्पातै गर्दैथिएं म । खै किन यस्तो गर्दैछु म ? कुरा लेखाईको हो । खै के को फुर्ती आएको हो मलाई ? ब्लगमा दिन नबिराई यौटा यौटा कुरा (कहिले गीत , कहिले गजल कहिले के , कहिले के ) राख्न लागेको छु । मेरो ब्लगमा पस्नेहरुलाई पनि दिक्क लाग्छहोला । पछिल्लो पटक यौटा गीत राखेको छु । त्यो लेखाई त्यस्तै परेर जुर्यो । त्यहि कुरा नै मैले पहिले गीतमै लेखिसकेको छु सायद । त्यसैले लेखेर ब्लगमा राखिसकेपछि मलाई स्थाईमा बाहेक अरुकतै मनपरेन त्यो गीत तै पनि मैले त्यो गीत हटाईनं बरु कुनैदिन फुर्सदमा त्यसलाई काँटछाँट गरुँला भन्ने मनमा आयो । त्यसपछि अर्को एउटा गजल केहिदिन अघि मात्र लेखेको राखेको छु । के मसंग ब्लगमा लेख्न अरुकुराहरु छैन ? खाली मैले मेरो ब्लगमा गीत , गजल , कविताहरु मात्र राख्नु ? यो प्रश्न गंभिर भएर मेरो सामु खडा भएको छ आजभोली । त्यसैले म ब्लगमा दिनहुँ पोष्ट थप्न छाडेको छु । त्यसैले मसंग केहि ड्राफ्टहरु थपिएका छन ब्लगमा । थपिउन म धैर्यले राख्दै जानेछु ।
मैले लेखनीमा गुणात्मक वृद्धि गर्दै जानेबेला हो अब संख्यात्मक वृद्धितिर लागें भने लेख्नु र नलेख्नुमा फरक नआउला । यो कुरा मैले लेख्न शुरु गर्दैतिर सिकेको हुँ आफ्नै दाजुबाट । प्रसंग उठेको बेला अलिकति कुरा जोडीहालौं - सानैदेखि मलाई लेखाईमा रुचि बढ्यो तर लेख्नलाई प्रेरणा मिल्ने खालको ठुलो संगत कहिल्यै पाईनं बरु अहिलेलाई मैले निक्कै ठुलो संगत पाएको छु ब्लगर साथीहरुको । सानो छँदा म र मेरो दाजुको होड चल्थ्यो कस्ले किताबमा पढेको कविताहरु रिट्ठो नबिराई कण्ठस्थ पार्ने भनेर , म उसलाई कहिल्यै जित्न सक्दिनथें । उसको दिमाग साह्रै चतुर थियो साथै साह्रै धारिलो पनि म अलि कमजोर नै थिएं तर पनि कविता घोक्ने कुरामा म पनि कम हुन्नथें । म आफुले कक्षामा दुई वर्षपछि पढ्नुपर्ने दाजुको किताबको कविता पनि सर्लक्कै कण्ठ पार्थें । म पाँचमा हुँदा हो बेलुका पढ्न हामी तिनजना भेला हुन्थ्यौं म मेरो दाजु र अर्को पनि मेरै दाजु , फुपुको छोरा । उनिहरु दुबै सातमा थिए । एक बेलुका मैले उनिहरुलाई धमास दिएं ' तिमरको किताबको कोपिला कविता मलाई कण्ठ छ ' भनेर । उनिहरुलाई कक्षामा नपढाएको पाठ भएकोले उनिहरुले पढेका भएपनि घोकेका रहेनछन तर मलाई कण्ठै थियो । उनिहरुले पत्याएनन र मैले कविता भन्नथालें उनिहरु किताबमा हेर्नथाले । मैले नबिराई कविता भनेर जितेको उनिहरुलाई मनपरेन क्यार मेरो दाजुले कविता लेख्ने प्रस्ताव निकाल्यो । सबै मञ्जुर भयौं र कविता लेख्न थाल्यौं । लेखेर सुनाएको कवितामा मेरो दाजुले नै राम्रो लेखेको थियो । मलाई अहिले न दाजुले लेखेको कविता याद छ न मैले त्यतिबेला के लेखेको थिएं याद छ तर मेरो फुपुको छोरा , दाजुले त्यतिबेला लेखेको कविता भने मलाई राम्रै याद छ । उनले यस्तो लेखेका थिए -
त्यो रुखमा बटर पाकेको
मेरो डरले त्यो केटा भागेको ।
हामीले ६/७ हरफ कविता लेख्दा उनले दुई लाईन मात्र लेखेका थिए । त्यसबेला हामीले उनलाई खुब जिस्काएका थियौ । 'बडहर' लाई बटर लेखेको भनेर र उनले नै भनेका थिए लेख्न खोज्दा नजिकैको बडहरको रुख सम्झना आएर लेखेको भनेर । यसरी नै लेख्ने बानीको बिकाश हुंदै गएर पछि ९ /१० कक्षामा पुग्दा मैले कविताहरुले यौटा सिंगै कापी भरेको थिएं । संख्याको हिसाबमा मसंग मेरो दाजुको भन्दा धेरै कविता थिए । त्यो पनि उसलाई मननपरेर हुनुपर्छ दाजुले मलाई भनेको थियो तँ संख्या बढाएर हजारवटा कविता लेख तर मैले गुण बढाएर लेखेको १० वटा कविताले जित्छ । मलाई साह्रै घत लागेको थियो उसको कुरा । यहि कुरा पछि अन्त पनि सिकें मैले तर पहिले दाजुले नै सिकाएको थियो ।
मलाई दाजुले नेपालका कविहरुको बारेमा पनि कतिकुरा बनाएरै भएपनि सुनाउंथ्यो । विचरा ! उसले पनि सिक्न कहाँ पाउंथ्यो र ? हामीदुबैले किताबहरु पढ्न पाउने अवसर उस्तै त थियो आँखिर । जे होस उसले मलाई सुनाएको उसको बनावटी कुरा भएपनि यौटा यस्तो थियो - लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा , लेखनाथ पौड्याल र बालकृष्ण सम ( उसले यि नै तिनजनाको नाम लिनु चाँही मलाई गफदिंदा तुरुन्तै सम्झनामा आएका नामहरु हुन सक्छन , अहिले मैले अनुमान गर्दा ) का कविताहरुमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरु जंगलका फूलहरु हुन त्याँहा सुन्दर लालीगुराँस देखि बनमारा सम्म फुलेका हुन्छन । लेखनाथ पौड्यालका कविताहरु यौटा फूलबारीका कविताहरु हुन त्याँहा छानीछानी रोपिएका सुन्दर फूलहरु सयपत्री , मखमली ईत्यादी हुन्छन तर लालीगुराँस हुंदैन र बालकृष्ण समका कविता गमलाको फूल हो त्याँहा विशेष गरेर फुलाएको गुलाफ जस्ता फूलहरु हुन्छन । यो उसले सिकेको , सुनेको , पढेको आधारमा थपेर मलाई दिएको गफबाहेक केहि नभए पनि केहि हदसम्म मलाई चित्त बुझेको थियो उ बेला । अहिले सम्झंदा लाग्छ हामी फराकिलो आकाश खोज्थ्यौं त्यो बेला , साहित्यमा ज्ञानको सागरमा पौडन चाहन्थ्यौं त्यो बेला तर हाम्रो शिरमाथी न आकाश थियो फराकिलो न पौडनलाई सागर नै कहिँ । अहिले मेरो दाजुले लेख्न छाडीसक्यो लेखिरहेको भए उ म भन्दा धेरै राम्रो लेख्न सक्थ्यो । म चाहीँ लेख्दै नै छु जे पायो तेहि भए पनि निरन्तरता दिईरहेछु लेखनीलाई तर यहि निरन्तरता केहिदिन यता मलाई बिझाउन थालेको भान भैरहेछ ।
अब लेख्दा मैले लेखाईमा आफ्नो वजनको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न दिमागमा उठ्न थालेको छ । खासगरी पछिल्ला केहिदिन मैले दिन नबिराई ब्लगमा पोष्ट राख्न थालें । हरेक पोष्टमा कि कविता , कि गीत , कि गजल आदि हुनथाले र अझै नभएर ड्राफ्टको रुपमा पनि बस्न थाले । अन्य मैले नियमित हेर्ने साथीहरुको ब्लगमा कति शान्त र सौम्य तवरले विस्तारै पोष्ट थपेको पाएं त्यसैले मलाई लाग्यो अब मैले अलिकति फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ बरु ड्राफ्टनै राखेर पनि यस्तै गन्थन मन्थन लेखेर पोष्ट गर्नुपर्छ बरु तर ब्लगमा पस्नेलाई नै दिक्क लाग्ने गरेर एकोहोरो रचना थुपार्नु हुंदैन भन्ने सोच आयो । यहि सोचले लेखनीमा संख्यात्मक हैन गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोचपनि ल्यायो । त्यसो त म सक्दिनं नलेखि । केहि न केहि दिमागमा गुजुल्टिन शुरु भैहाल्छ र त्यसलाई फुकाउन खोज्दा कि त गजल कि त कविता आदिको जन्म भैहाल्छ र अर्कोकुरा के पनि हो भने गुणात्मक वृद्धि गर्नको लागी कम लेख्न थाल्यो भने झन अभ्यासमा कमि हुन गएर गुणमा अझ ह्रास पनि त आउला । एकातिर यो गुण र संख्यालाई ध्यानमा राखेर कम लेख्ने हो कि अझ धेरै लेख्दै जाने हो साँच्चै द्विविधामा परेको छु म भने अर्कोतिर लेख्ने क्रमको गति अझै उस्तै छ खालि ब्लगमा राख्ने क्रममा न्युनिकरण गर्ने सोच बनाएको छु त्यसो गर्नलाई पनि मन थाम्न सक्छु कि सक्दिनं त्यो चैं आफैंले पनि हेर्नैपर्छ ।
Posted by दीपक जडित at 3:13 PM4comments: Links to this post
लर्बराए खुट्टा आफ्नै मानेनन बोक्न मलाई ।
भट्टी पुगें तर मनले सकेन रोक्न मलाई ।
भन्दछन लौ साह्रै बिग्रिस् तँ त बद्री भन्दापनि ,
आफुले चैं कहिले पनि सकिनं जोख्न मलाई ।
धेरै नै भनें कसैसंग कुनै अधिकार छैन ,
पियो भनेर जँड्याहामा हलुकै तोक्न मलाई ।
कैले अबेर घर आईंनं धम्कि पनि दिईनं ,
छाडिनन् कसै गरेपनि प्रियाले टोक्न मलाई ।
होस आफ्नो कहिल्यै गुमाईंन जति पिएपनि ,
जित्न त कसैले सक्दैन कहिल्यै धोक्न मलाई ।
भाटे कार्बाही गर्ने हो भन्दै केटाकेटीले घेरे ,
सम्झाउंदा नि राखेनन् बाँकी तिन्ले ठोक्न मलाई ।
तिम्रा मनको 'दीपक' आँखिर बालिदियौं हाम्ले ,
भन्दै संधै भेटमा तिन्ले छाडेनन् खोक्न मलाई ।
Posted by दीपक जडित at 1:41 AM2comments: Links to this post
मसंग नि घाउ छैन , छैन घाउ तिमीसंग नि
भन फेरी हामी बिचमा आज यो के दुख्दैछ नि ?
पाईला जहाँ टेकें मैले त्यहीँ तिम्रो मुटु थियो कि ?
लाग्यो कि कतै त्यो मुटु जानीजानी कुल्चिदियो कि ?
मायाको शिखर आज किनहोला झुक्दैछ नि
सक्दिन कि मेरो मायाले यौटा सानो संसार थेग्न
किन सक्दिनं म आफु भित्रको कमजोरी देख्न ?
किन आफ्नै मनको आँखा आफैंबाट लुक्दैछ नि ?
कति गाह्रो दुखेरै पनि आज आँखा रुन सक्दैन
दुखेको यो मनले फेरी तिमीलाई छुन सक्दैन
छातीभित्र मायाको मूल किन आज सुक्दैछ नि ?
Posted by दीपक जडित at 7:28 PM No comments: Links to this post
बकुल्लो एउटै परें म त यहाँ कागका हुल छन ।
सिध्याउन के बेर मलाई यहाँ बाघका हुल छन ।
जताततै हेर विषालु ति गोमन र करेत जस्तै ,
कर्कट , कुलिर , तक्षकझैं यहाँ नागका हुल छन ।
देखिंन मैले खै के पाएं यहाँ सधैं खाली रित्तो म छु ,
अरुका हेर लौ आफ्ना आफ्ना यहाँ भागका हुल छन ।
झट्ट हेर्दा सबको टाउको मान्छेकै हो झैं देखिन्छ ,
संगत गर्दाकन था'हुन्छ यहाँ छागका हुल छन ।
अंगारको पनि बरु मुल्य होला मेरो तर छैन क्यै ,
बहुमुल्य देखिन्छन सबै यहाँ खागका हुल छन ।
एक्लो यस्तरी भईछस् ए ! 'दीपक' तँ त सडक जस्तै ,
त्यहीं टेकीहिंड्ने अनेकौं यहाँ सुहागका हुल छन ।
Posted by दीपक जडित at 8:21 PM6comments: Links to this post
दक्षिण एसियाली मानब अधिकारकर्मीको अन्तरक्रिया अमेरिकामा , साँझको पत्रिकामा समाचार छापियो । दैनिक पत्रिकाले यो समाचार लेखिसक्नै भ्याएको थिएन । सुन्दरमानको सेलफोन घन्किन थाल्यो । अनेक प्रकारका कलहरु आउन थाले । यात्राको शुभकामना दिने र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनेहरु पनि कम थिएनन तर धेरैजसोले सुन्दरमानलाई मानब अधिकारकर्मीको टोलीमा सामेल गराएर एकजनालाई अमेरिका सम्म पुर्याउन सकिन्न भनेर सोधेका थिए । सुन्दरमानले मान्छे हेरीहेरी जवाफ दिए । कसैलाई त्यो त सरासर मानब तस्करी भै हाल्यो नि भने । कसैलाई होईन हजुर मानब अधिकारको निम्ती डटेर लागेको छु म यस्तो काम कसरी गरुं भने । धेरैलाई टाल्दै गएपनि यस्तै कलहरु आउने क्रम जारी नै थियो । अन्तत: कल गर्नेमध्येको यौटालाई उनले प्रश्न गरे , ' हामी यो कुरालाई कतिको गोप्य राख्न सक्छौं त ? ' उताबाट जवाफ आयो , ' त्यसको धन्दा नमान्नुस् न । म समाजमा तपाईंको ईज्जतमाथि आँच आउन दिउंला त ? ' सुन्दरमान एकछिन घोरिए र भने , ' हुन्छ नि त त्यसो हो भने । टोलीमा मिलाउंला तर हामीहामीको कुरा हो हजुर अहिले त यसकामको दरभाउ १२ भन्दा माथि पुगेको छ नि , तर म हजुरको लागि १२ मै गरुँला नि । '
दुबैतर्फ सहमती भयो । भोलीपल्ट सुन्दरमानले अधिकारकर्मीको टोलीमा थपघट गरे । भित्रभित्रै दरभाउ बुझ्ने बुझाउने काम भयो । सुन्दरमानको टोली अमेरिका पुगेर यौटा मानब उतै थन्को लगाई उद्धार गरेर फर्कियो । भित्रभित्रै भएको यो खबर पत्रिकाले सुईंको पनि पाएन । त्यसैदिन सुन्दरमानले पत्रकार सम्मेलनमा खाडी मुलुकमा बेचिए सरी ठगिएका नेपालीहरुको हकका लागी एकहप्ताभित्रै फेरी यौटा टोली खाडी मुलुक जाने जानकारी गराए ।
केहि दिन अगाडी लेखेको यो छोटो कथालाई समकालिन साहित्य डटकममा पठाएर प्रकाशित भै सकेपनि आफ्नै रचनाहरुको ट्राफिक धेरै भएकोले बल्ल आफ्नो ब्लगमा राख्दैछु । नयाँ रचनाहरुमा अझैपनि २ वटा गजल र यौटा कविता आफ्नै ब्लगमा देखापर्न पालो कुरेर ड्राफ्ट भएर बसेका छन । म सकेसम्म यौटा मितीमा यौटा भन्दा धेरै पोष्ट नपरोस भन्ने चाहन्छु , यतिखेर लेख्न अलि फुर्सद मिलेर पनि होला रचनाहरुको ट्राफिक जाम भएको ।
Posted by दीपक जडित at 1:44 AM5comments: Links to this post
पाउमा राखेर दाम चढाए ।
जुनाफमा फेरी नाम चढाए ।
अधिकार काटेको ध्वाँस दिए ,
भित्रभित्रै जुन घाम चढाए ।
भने दरबार खाली गरायौं ,
नागार्जुनको तामझाम् चढाए ।
रोजगार खोज्ने जनतालाई ,
सेवा - सुरक्षाको काम चढाए ।
चढाउन केहि नपाउनेले ,
परैबाट लालसलाम् चढाए ।
गोप्य सम्झौता लेखेर आँखिर ,
सुवर्ण 'जडित' खाम चढाए ।
Posted by दीपक जडित at 1:35 AM2comments: Links to this post
सानै देखि हल्लक्कै बढेको
उसको शारिरिक उचाई
उसैको आफ्नालाई बिझायो
आफ्नैले उसलाई होच्याउन
सानो दर्जा दिए
आफन्तले दिएको सानो दर्जा
बिझेको मनले गमेर उसले
आफ्नाहरुलाई अवलोकन गर्यो
देख्यो उसलाई होच्याउने आफ्नाहरु
सबै फल लाग्ने रुख भए
सबै निहुरिने , सँधै निहुरिने
उसलाई त्यो पनि बिझायो
सोच्यो म निहुरिनु हुँदैन
सानैदेखि उ बेग्लै भयो
आफ्नाहरुलाई जित्ने अठोट गरेर
उ फल नलाग्ने रुख भयो
निहुरिनु परेन उस्लाई कहिल्यै
आफ्नाको अगाडी निहुरिएन उ
परायाको अगाडी निहुरिएन
केवल अग्लिन जान्यो
उस्ले कहिँ नझुकि
आफ्नो उचाई कायम राख्यो
अग्लिएरै सर्वोच्चता पायो उसले
अग्लिएरै सगरमाथा भयो
आज आफ्नाहरुले भने
अब अग्लिने ठाउँ छैन
आज परायहरुले भने
अब छुनलाई कुनै उचाई छैन
र अग्लिंदैछ अझै
आफ्नो उचाईको हद नाघेर ।
Posted by दीपक जडित at 1:07 AM3comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 6:23 PM4comments: Links to this post
जति लेखुँ सँधै सरल लेखुँ म क्लिष्टता नआवोस ।
देखेको लेख्दा मर्यादा हुन्नभने शिष्टता नआवोस ।
छोपेर सत्य औ माथीबाट पोतेर झुटको रंगले ,
भ्रम फैलाउन कुनै कलममा धृष्टता नआवोस ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनोस पाओस सुयोग्य अघि बढ्न ,
धोकाधडी , चाकरी , छल्छामको उत्कृष्टता नआवोस ।
मान्छेको त के कुरा म भित्र छ भने ईश्वरकै पनि ,
भक्तिमा स्वार्थ मिसाउनुपर्ने त्यो निष्ठता नआवोस ।
मनुवा प्राणी 'दीपक' पनि ठान्दछ सब बराबरी ,
नउ'म्रोस जिलोबुटो अहँको विशिष्ठता नआवोस ।
अहो ! अहिले आफैंलाई सुन्दर लाग्यो । दिलिप जीलाई धन्यवाद पुन एकपटक । मैले पहिलेको र अहिलेको दुबै स्वरुप यहाँ राखेको छु ता कि संधै मलाई प्रस्तुती कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने हेक्का रहोस ।
जति लेखुँ सँधै सरल लेखुँ म क्लिष्टता कहिल्यै नआवोस ।
देखेको लेख्दा मर्यादा हुन्नभने शिष्टता कहिल्यै नआवोस ।
सत्यतथ्य छोपछाप पारी रंगरोगन झुटको लगाएर ,
भ्रम फैलाउन कुनै कलममा धृष्टता कहिल्यै नआवोस ।
'दीपक' पनि त एक मनुवा प्राणी ठान्दछ सबै बराबरी ,
नउ'म्रोस जिलोबुटो अहँको विशिष्ठता कहिल्यै नआवोस ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनोस पाओस योग्यमात्रै सँधै अघि बढ्न ,
धोकाधडी चाकरी छल्छामको उत्कृष्टता कहिल्यै नआवोस ।
मान्छेहरुको त के कुरा भो म भित्र छ भने ईश्वरकै पनि ,
भक्तिमा स्वार्थ मिसाउनुपर्ने त्यो निष्ठता कहिल्यै नआवोस ।
यस अघिको गजलमा दिलिपजी ले गर्नुभएको प्रतिक्रियाले यो गजलको मेसो निस्किएको हो । दिलिपजीलाई धन्यवाद ! दिलिपजीले नै यहाँ मलाई 'धृष्टता ' शब्द लेख्न सिकाएर गुनपनि लगाउनु भएको छ ।
Posted by दीपक जडित at 11:44 PM2comments: Links to this post
टाउको थिए तिनिहरु
भित्र खोपडीमा गिदी भरिएको
बाहिर घना केशले ढाकिएको
आँखाले हेर्न सक्ने
कानले सुन्न सक्ने
मुखले आवाज निकाल्न सक्ने
जिउंदो जाग्दो टाउको थिए
लाग्थ्यो कुनैदिन त
शरिर बन्नेछन तिनीहरु
हिंडाउनेछन समग्र युगलाई
एकै चालमा छरितोसंग
सुन्दर समुन्नत नेपाल ।
हेर्न सक्ने आँखाले
निदाएको बहाना गर्यो
सुन्न सक्ने कानले
बहिरो छु भन्यो
बोल्न सक्ने मुखले
आफ्नै गिदी चपाईदियो
छेक्न सकेनन घना केशहरुले
टाउको कुहिंदै गयो
टाउको सड्दै गयो
टाउको बचाउन तिनीहरुले
ऐँजेरुको सहारा लिए
टाउको सुक्दै गयो
ऐँजेरु झाँगिदै गयो
केशहरु झर्दै गए
टाउकोको अस्तित्व झनै
खतरामा पर्दै गयो
केश बचाउन तिनीहरुले
साबुन फेरी फेरी
टाउको धुन थाले
दुर्गन्ध हटाउन तिनीहरुले
सैम्फो दली दली
टाउको पखाल्न थाले
खल्वाट प्राय भयो
आँखा छोप्यो ऐँजेरुले
कानहरुमा पिप भरिए ।
आफैंले गिदी चपाएको
टाउकोको अस्तित्व रक्षा गर्न
पर्दा पछाडीबाट मुख बोल्यो
यो हतियार उठाउने बेला हो
बिस्थापित गरेर टाउकोलाई
हो हो गरेर हल्लियो
र गिदी चपाईएको टाउकोले
हतियार उठाउने हात
खोज्न थाले तिनीहरु
कहिल्यै पुर्ण बन्न नसकेको
आफ्नै शरिरमा ।
Posted by दीपक जडित at 7:02 AM2comments: Links to this post
जुन ३ तारिख यौटा ईमेल पाएं । लेखिएको थियो - ' मैले एउटा नेपाली गजल ग्रुप बनाउन खोजेको निम्तो छ है । ' पठाउने हुनुहुन्थ्यो ई-परिचित मबि सिँ । अचाक्ली खुशी लाग्यो । खुशी लाग्ने नै भयो नि गीत , गजलहरु लेख्न रहर गर्ने म जस्तोलाई । हतार हतार निम्तो स्विकारें । त्याँहा यौटा गजल मण्डल तयार हुँदैथियो ।
म पुग्दा त्याँहा म बाहेक अरु तिनजना भए जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनं । म बाहेकका अरु दुईजनामा एकजना मबि सिं स्वयं हुनुहुन्थ्यो भने अर्को एकजना दीपक खड्का हुनुहुन्थ्यो । अर्को एकजना याद गरिनछु । मलाई त्यस गजल मण्डलीमा छलफलको लागी कुरा उठ्न शुरु भैहाले हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैथियो त्यसैले पस्दै निस्कंदै पस्दै निस्कंदै गर्दैथिएं । मण्डलीमा सदस्यहरु न्युन गतीमा भएपनि थपिंदै हुनुहुन्थ्यो ।
जुन ४ तारिख भै सकेको थियो र मण्डलीमा हामी ७ जना जम्मा भएका थियौं तर त्यसबेला सम्म एक अर्कामा कुरागर्ने हिसाबले कसैले केहि कुरा राख्नु भएको थिएन । मलाई ज्यादै खस्खस लाग्यो र मैले यौटा गजल लेखें त्याँहा राख्नको लागी । त्यसपछि त म निम्तारु पनि रहिंन । बस् यतिकुरा भन्न र त्यो निम्तो मान्न जाँदा लेखेको गजल सुनाउनको लागी यत्रो भुमिका बाँधेको है मैले । गजल यस्तो थियो -
गजल ग्रुप भनियो यो भेला के को लागी ?
वहस कुनै हुन्न भने मेला के को लागी ?
अहिलेसम्म सप्तऋषी जम्मा भएका छौं ,
वहस के ले छेक्यो यो अबेला के को लागी ?
पहिले जस्तै एक्लै एक्लै सबै हिंड्ने भए ,
पाङ्ग्रा हाली हाली बना'को ठेला के को लागी ?
मबि सिं गुरु बोल्नुपर्ने अझै चुप हुँदा ,
प्रश्न गर्दैछु म भन्नुस खेला के को लागी ?
कहाँबाट आयो 'जडित' बाठो भन्नुहोला ,
नबोलेपछि गुरु हामी चेला के को लागी ?
तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त गजल ? लागेको लेख्नुहोला । ए साँच्चि उक्त मण्डलीमा हामी अहिलेसम्म जम्मा १० जना भेला भएका छौं । तपाईंपनि आउनुहुन्छ ? आउनुहुने हो भने यसमा ईमेल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ - nepalighazal@googlegroups.com /
Posted by दीपक जडित at 6:29 AM4comments: Links to this post
यस्पाली नि तिन्ले भने जीत जनताको
होला ता' नि भनि लेखें गीत जनताको
फेरीएर आ'का सबै नयाँ मुहारले
भने हामी मात्रै साँचो मित जनताको
जनताकै नाम अझै लिएपनि तर
छाँट देखिएन गर्ने हित जनताको
जुन , तारा , आकाश नि रोजे तिनैले नै
भाग पर्नेभयो चिसो शीत जनताको
नेपाली ओठ् अझैपनि हाँस्न नपाउंदा
अर्को युद्ध थाल्नु पर्ला कि त जनताको ।
Posted by दीपक जडित at 3:49 AM2comments: Links to this post
आज पनि एउटा दिन गलेर गयो
दिन छिप्पिन नपाउंदै शिथिल भएको
मैले आफ्नै आँखाले देखें
बेलुकी सम्ममा थाकेर
आफ्नै मनको आँगनमा निस्किएं
मनकै आँगनको डिलमा थचक्क बसें
पछाडी फर्केर हम्केरा हाल्दै
अझै छन त्याँहा
बलेंसीमा बगेका रगतका टाटाहरु
कैले यो मन खुर्कीखार्की पारेर
फाल्नु रगतका ति टाटाहरु
र सफा पार्नु यो मनको घर आँगन ?
खुईय ! सुस्केरा काढेर
अहँ छैन मेरो घर
अझै नियाँलेर हेरें
मेरो मनको घर
यो रातको निश्पट्ट अंधकारले
घ्वाप्पै छोपेको हो कि
साँच्चै हराएको हो मेरो मनको घर ?
भाउन्न छुट्यो मलाई
अहो ! मेरो घर साँच्चै हरायो
आँखा अगाडी तिर्मिर तिर्मिर
के ले के ले मलाई
हैन म ढल्दिनं
ढल्नु हुंदैन मैले
आँखै सामु हेर्दाहेर्दै हराएको
मेरो घर खोज्नु छ मैले
Posted by दीपक जडित at 5:29 PM No comments: Links to this post
गत २/३ दिनदेखि लागीपरेर एक अञ्जुली माया नामको आफ्नै एक सय एघार वटा गीतहरु समेटिएको अनलाईन गिती संग्रह तयार गरें । ब्लगस्पट डट कमको उपयोग गर्दै ब्लगको एकै पोष्टमा मैले सबै गीतहरु अटाएको छु र त्याँहा अरु थप कुनै पोष्ट राख्नेछैन । मेरो अनलाईन गिती संग्रहमा पस्ने लिंक http://ekanjulimaya.blogspot.com/ हो। मैले यसै ब्लगको अन्य सम्पर्कहरु राखेको ठाउँमा पनि उक्त लिंक राखेको छु । त्यसैगरी नेपाली ब्लगरहरुको मुलघर ( ब्लग डाईरेक्ट्री ) मा पनि एक अञ्जुली मायाको लिंक राखेको छु । आशा गर्छु यस ब्लगमा आईपुगेपछि तपाईं अवश्य एकपटक एक अञ्जुली माया भित्र पस्नुहुने छ र एक अञ्जुली मायाको लागी अमुल्य प्रतिक्रिया पनि छोडिदिनुहुनेछ । अहिलेलाई आउनुहोस मैले २०५१ सालको तिहारको बेला लेखेको यौटा गीत /गजल एक अञ्जुली माया भित्रैबाट यहाँ राख्दैछु ।
बर्वाद म भएको तिमी हेर्न आउ
लेखिदिन्छु यौटा गजल
तिमी त्यसलाई गाउ ।
रमिता कतिलाई कतिलाई तमाशा
बनेछु म त एक ब्यंगचित्र
कोरिदिन्छु म यौटा प्रति
त्यसलाई कोठामा सजाउ
बर्वाद म भएको तिमी हेर्न आउ ।
कतिताल म छोपुँ कतिताल लुकाउँ
भएछु म त एक बाद्ययंत्र
दिईदिन्छु म तिमीलाई
लगेर तिमी बजाउ
Posted by दीपक जडित at 2:53 PM4comments: Links to this post